Myanmar Job / Myanmar Net ® မြန်မာနက်
အလုပ်ခေါ်စာ တစ်ခုလောက် ရှာကြည့်ရအောင်
ရှာချင်တဲ့ အလုပ်၊ မြို့၊ မြို့နယ်၊ ကုမ္ပဏီ၊ ဘွဲ့ တစ်ခုခုရိုက်ပြီး ရှာကြည့်ပါ။
အခုအချိန်မှာ ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်အကိုင် အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ အလုပ်ရပ်တာတွေ ရှိသလို၊ အလုပ်အသစ် ခေါ်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ရုံးအလုပ်ကို အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်နိုင်မယ့် အလုပ်တွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။
အမျိုးအစားဖြင့်ရှာ ကုမ္ပဏီ နာမည်နဲ့ရှာ ဘွဲ့ နဲ့ရှာ မြို့နယ် နဲ့ရှာ ကိုယ်ရေးပုံစံ ဖြည့်မယ် အကူအညီတောင်း
#မြန်မာနက် က အလုပ်လုပ်ချင်သူတိုင်းကို ကူညီလျက် ရှိပါတယ်။ မြန်မာနက်က အလုပ်ရှာပေးတဲ့ ပွဲစား အေဂျင်စီ မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ အခုလို ကြပ်တည်းနေတဲ့ခေတ်မှာ အလုပ်လိုအပ်နေတဲ့ ရွှေမြန်မာတွေကို အခမဲ့ ကူညီနေတာပါ။
Myanmar Net Job Search ကို ဘယ်လို သုံးရမလဲ ?
အလုပ်ခေါ်စာပေါင်း မြောက်များစွာကို အမျိုးတူရာ အလုပ်ခေါ်စာတွေကို သတ်သတ်စီ စုထားပေးပါတယ်။ များပြားလှတဲ့ အလုပ်ခေါ်စာတွေကို ကြည့်ရလွယ်အောင် နဲနဲလေး ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ အလုပ်ခေါ်စာ ကြည့်နည်း ၄ မျိုး ရှိပါတယ်။ (၁) အလုပ်အမျိုးအစားနဲ့ ရှာမလား? (၂) အလုပ်လုပ်ရမယ့် မြို့/မြို့နယ်နဲ့ ရှာမလား? (၃) အလုပ် ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ နာမည်နဲ့ ရှာမလား? (၄) ရ ထားတဲ့ ဘွဲ့နဲ့ ရှာကြည့်မလား? အောက်က စိတ်ဝင်စားတဲ့ လင့်တစ်ခုခုကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ဥပမာ- "ယာဉ်မောင်း" အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် "ယာဉ်မောင်း" ဆိုတဲ့ လင့်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ "ယာဉ်မောင်း အလုပ်ခေါ်စာ" တွေ အများကြီးကို ထုတ်ပြပေးပါမယ်။ အလုပ်ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ မတူသလို၊ သူတို့ အလုပ်ခေါ်တဲ့ ပုံစံမတူတတ်ဘူး ဆိုတာ နားလည်ပေးပါ။ အချို့က လူကိုယ်တိုင် သူတို့ရုံးကို လာလျှောက်ခိုင်းတယ်။ အချို့က ဗိုင်ဗာနဲ့၊ အချို့က အီးမေးလ်နဲ့။ အဲဒါတွေကို တစ်ခုချင်း လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ အလုပ်လျှောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ် တစ်ခု လျှောက်ပြီးပြီဆိုရင် ဒီကို ပြန်လာပါ။ ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်တဲ့ နောက် အလုပ်ခေါ်စာ တစ်ခုကို ထပ်ရွေးပါ။ အလုပ်လျှောက်စွာ+ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင်တို့ကို ပို့ထားပေးလိုက်ပါ။ အလုပ်ခေါ်တဲ့ လုပ်ငန်းက အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် မန်နေဂျာတွေက သဘောကျရင် ပြန်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။
Myanmar Net Job Search Engine
(၁) အလုပ်အမျိုးအစားနဲ့ ရှာမလား?
အလုပ်ခေါ်စာတွေ ဘယ်နှစ်ခု ရှိတယ်ဆိုတာ ဘေးက ကွင်းခတ်ပြထား ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ စာစီစာရိုက် (1650)
ကလေးထိန်း / Babysitter (+)
ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင် (2550)
အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ရှာမတွေ့ရင် ဒီ အပေါ်က အကွက်ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာပါ။
(၂) အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ မြို့/မြို့နယ်နဲ့ ရှာမလား?
မိသားစု ကိစ္စအကြောင်းကြောင်းကြောင့် မိမိနေထိုင်လိုတဲ့ မြို့အပေါ် စက်မှုဇုံအပေါ် မူတည်ပြီး အလုပ်ရှာတဲ့သူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။
အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ မြို့နယ် ရှာမတွေ့ရင် ဒီ အပေါ်က အကွက်ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာပါ။
(၃) အလုပ် ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ နာမည်နဲ့ ရှာမလား?
လူတိုင်းမှာ မိမိစိတ်ကူးယဉ်တဲ့ အလုပ်တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဆိုရင် လူကြီးမင်းကြိုက်တဲ့ ကုမ္ပဏီ နာမည်တွေ ရှာကြည့်ပါ။ အဲဒီ ကုမ္ပဏီတွေက အလုပ်ခေါ်စာတွေ ပြပေးပါ့မယ်။ ဘယ်လို ကုမ္ပဏီမျိုးမှာ အလုပ် လုပ်ချင်ပါသလဲ။
Coca Cola (54700)
အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ ကုမ္မဏီ ရှာမတွေ့ရင် ဒီ အပေါ်က အကွက်ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာပါ။
(၄) ရ ထားတဲ့ ဘွဲ့နဲ့ ရှာကြည့်မလား?
အလုပ်ရှင်တွေက ဘာဘွဲ့ ရထားတဲ့လူ အလိုရှိသည် ဆိုပြီး၊ ဘွဲ့အမျိုးအစားနဲ့ အလုပ်ခေါ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါတွေကို ရှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ မိမိရထားတဲ့ ဘွဲ့အမျိုးအစားကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီဘွဲ့ရထားသူတွေအတွက် အလုပ်ခေါ်စာတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဘွဲ့နာမည် အတိုကောက်တော့ သိဘို့လိုပါမယ်။
BE Civil (173000)
B Tech (4380)
ကိုယ် ရ ထားတဲ့ ဘွဲ့နာမည် နဲ့ရှာမတွေ့ရင် ဒီ အပေါ်က အကွက်ထဲမှာ ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာပါ။
အားလုံးအတွက် မြန်မာနက် ® ⦿ မြန်မာနက် ⦿ အင်တာနက်လမ်းညွှန် ⦿ ဂိမ်း ⦿ သတင်း ⦿ အကျိုးဆောင် ⦿ ဗေဒင် ⦿ ဈေး ⦿ အလုပ်ရှာ ⦿ ကား ရောင်းဝယ်ငှား ⦿ ရုပ်ရှင်ကြည့် ⦿ သီချင်းနားထောင် ⦿ ပိဋကတ်တရားနာ ⦿ စားစရာမှာ ⦿ အိမ်ခြံမြေ ⦿ ဥပဒေ ⦿ အဘိဓာန် ⦿
© Copyright 1998-2022 by Myanmar Net Media, မြန်မာနက် ဆော့ဝဲ ကုမ္ပဏီလိမိတက်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ